Umaki: ubanga udumo | Martech Zone
Umaka: ubanga udumo
Ngiyakuthanda ukuklama, kepha ngingumklami omubi. Ngiyakuthanda ukuthuthuka, kepha ngiyinkohliso impela. Futhi ngibhala nsuku zonke ku Martech Zone futhi ngibhale ama-Corporate Blogging For Dummies, kepha angizihlukanisi njengomlobi. Kepha ngibona ukwakheka okuhle, ngishaywa umoya yintuthuko enkulu, futhi ngithanda ukubhala okuhle. Sisanda kwethula isiza esisha sebhizinisi se- DK New Media, ngakho-ke lesi seluleko esivela ku-Thinkshift sasisebenza ngesikhathi esifanele